Ogaden News Agency (ONA) – Jabhada TPDM oo Itoobiya Heshiis Lasixiixatay.
Jabhada TPDM oo Itoobiya Heshiis Lasixiixatay.
Posted by Dulmane	/ August 29, 2018
Wararka naga soo gaadhaya magaalada Casmara ee xarunta wadanka Eritrea ayaa sheegaya in ay magaalada heshiis kukala sixiixdeen Jabhada TPDM oo udagaalami jirtay xoraynta dhulka Tigreega iyo xukuumada Itoobiya.
Gudoomiyaha Jabhada TPDM Mekonen Tesfai oo heshiiska dhinaca Jabhada usixiixay ayaa sheegay in ay hab nabad galiyo ah wax kuraadin doonaan qorigiina ay qalin kubadali doonaan, wuxuuna sheegay in maamulka cusub ee Itoobiya uu ogolaaday in si nabad galiyo ah loowadahadlo.
Gudoomiye Mekonene Tesfai oo warfidiyeenka magaalada Asmara kula hadlayay ayaa sheegay in ay wadankii aadi doonaan isla markaana howlahooda ay halkaas kawadi doonaan iyagoo latashan doona odayaashii iyo dadkoodii oo aysan mudo dheer fursadisu helin.
Dhinaca kale General Aadem Maxamed oo ah ninka ugu sareeyay Sirdoonka Itoobiya ayaa usixiixay dhinaca Itoobiya, wuxuuna sheegay in uu aad usoo dhawaynayo heshiiska ay wadagaleen Jabhada TPDM, isagoo intaas raaciyay in ay kawada shaqayn doonaan wax badan oo dalka iyo dadka dan u ah.
Ma aha markii ugu horaysay oo ay heshiis kala sixiixdaan xukuumada cusub ee Abiye Axmed iyo Jabhad ladagaalamaysay maamuladii hore ee Itoobiya ka arimin jiray, waxaana la ogyahay in ay heshiis galeen xukuumada Abiye iyo Jabhadaha kala ah Ginbot 7 iyo wali OLF.
Abiye Axmed ayaa bilowgii magacaabistiisa kubaaqay wadahadal iyo in uu sifiican usoo dhawaynayo cidkasta oo cadaalad daradii jirtay kabiyo diiday isagoo sheegay in qofkasta aragtidiisa uu u madax banaan yahay kuna dhawaaqi karo.